Nibirigii soo caariyay oo calooshiisa laga helay qashin badan - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka SMASS
Nibirigii isagoo bakhtiyay kusoo caariyay xeebta jasiiradda Harris ee ka tirsan Scotland ayaa calooshiisa laga helay qashin uu culeyskiisu dhan yahay 100kg.
Shabqyada lagu kalluumeysto, xargo, caagagga xarig ahaanta u sameysan ee kartoomada lagu xirxiro, baco iyo waxyaabo kale ayaa ka mid ahaa qashinka faraha badan ee laga soo saaray xayawaankaas.
Khubarada ku xeel dheer cilmiga nolosha nibiriyada ayaa sheegay inaysan wali kala caddeyn in qashinkaas uu si toos ah sabab ugu yahay dhimashada xayawaankan iyo in kale.
Hase yeeshee, dadka deegaanka ee nibirigan ka helay xeebta uu kusoo caariyay Khamiistii ayaa sheegay in arrintan ay toosh ku ifisay dhibaatada ka taagan wasakhda lagu daadiyo badaha.
Image caption Shabaqyo iyo xargo badan ayaa ka mid ahaa qashinkii laga soo saaray nibirigan calooshiisa
Dan Parry, oo ku nool deegaan halkaas u dhow oo lagu magacaabo Luskentyre, ayaa yiri: "Aad buu u walwalsanaa xayawaankan, gaar ahaan waxaad taas ka garan kartaa marka aad aragtid shabaqyada lagu kalluumeysto iyo qashinka kale ee kasoo baxay calooshiisa".
"Xeebahan iyo agagaarkooda waxaan imaannaa maalin walba waxaana si joogto ah usoo qaadannaa jawaano aan qashinka uga gurno, inta badan qashinkaasna waa waxyaabaha la xiriira kalluumeysiga".
"Waxaa laga yaabaa in arrintan ay sababtay dhimashada nibirigan, inkastoo aan xaqiiqdeeda la heynin, laakiin waxaa cad dhibaatada uu qashinka ku hayo badaha".
Xubno ka tirsan waaxda baaritaanka ku sameysa xayawaannada kusoo caariya xeebaha ayaa dhacaan ka qaaday nibirigan si ay u ogaadaan sababta rasmiga ah ee keentay dhimashadiisa.
Nibiri dadka ka daba dhihi kara erayada sida 'hello'
Image caption Shabaq laga soo saaray nibiriga calooshiisa
Waaxda ayaa bayaan ay soo dhigtay boggeeda Facebook-ga ku tiri: "Xayawaankan xaaladdiisu si gaar ah uma aysan xumeyn, inkastoo uu qashinkan badan horseedi karo dhimashadiisana, wali wax caddeyn rasmi ah looma hayo arrintaas, sidaas awgeedna waxaan baareynaa dhacaankiisa".
"Qashinkan iyo bacaha sidaas u badan ee calooshiisa laga helay waa wax naxdin leh, waa khasab inay dheefshiidkiisa saameyn ku yeesheen, waxaana sidoo kale caddaatay in qashinka badda lagu daadiyo iyo shabaqyada kalluumeysiga ee la tuuro ama luma ay waxyeelleynayaan xayawaan badan oo ku nool badda".
Waxaa lagu aasay xeebta
Qashinka nibiriga laga soo qufay ayaa la aaminsan yahay inay ka kala yimaadeen kalluumeysatada iyo dadka deegaanka labadaba.
Ciidamada ilaalada xeebaha iyo shaqaalaha golaha jasiiradaha galbeed ayaa gacan ka geystay baaritaanka Sabtidii lagu sameeyay nibirigaas.
Waxay sidoo kale kaalin weyn ka qaateen godweyn oo xeebta laga qoday, laguna aasay nigirigaas aan aadka usii weyneyn.
Sida ay sheegtay waaxda baaritaanka ku sameysa xayawaannada kusoo caariya xeebaha, waxaa waayadii dambe soo badanayay nibiriyada iyo xayawaannada kale ee kusoo caariya xeebaha.
Sanadkii 2009-kii, 204 oo kiis halka sanadkii 2018-kiina lasoo tabiyay in ka badan 930 kiis oo noocaas ah.